शेरबहादुर देउवा « Nagarik Khabar
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारीसँग जुध्नका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । सोमबार बालुवाटारमा बसेको विपद् न्यूनिकरण राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले नाकाका सबै क्षेत्रमा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ बीच भेटवार्ता भएको छ । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सबै नागरिकलाई पूर्ण मात्राको खोप लगाइने बताएका छन् । शनिबार बालुवाटारमा स्वास्थ्यविज्ञहरुको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना रोकथामका लागि
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबारदेखि सबै कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने उनको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा कोरोना महामारी, कोभिड–१९ संकट
ओली–देउवा वार्ता सकियो, के भयो कुरा ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार बिहान बालकोटमा जारी वार्ता सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार ओली भेट्न आज बिहान
ओली भेट्न बालकोट पुगे प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटवार्ताका लागि बालकोट पुगेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा शनिबार बिहान भक्तपुरको
ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा बालकोट जाँदै
काठमााडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट जाँदैछन् । शनिबार बिहान साढे १० बजे प्रधानमन्त्री देउवा ओलीलाई भेट्ने क्रार्यक्रम रहेको ओलीका
प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी हुने भाइब्रेन्ट गुजरात लगानी सम्मेलन स्थगित
काठमाडौँ । गुजरात सरकारले यही १० जनवरीमा आयोजना गर्न लागेको १०औँ भाइब्रेन्ट गुजरात लगानी सम्मेलन स्थगित भएको घोषणा गरेको छ । कोभिड संक्रमण बढेको भन्दै गुजरात सरकारले सो सम्मेलन स्थगित
प्रधानमन्त्री देउवाले गरे विकास निर्माणबारे सचिवहरूसँग छलफल
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन, विकासमा प्राथमिकता र सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सचिवहरूसँग छलफल गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री
धरानमा दुई मिनेट बोलेका प्रधानमन्त्री देउवाले के भने ?
प्रकाश तिम्सिना सुनसरी । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न लागि परिरहेको बताएका छन् । धरान दिवस २०७८ मा सहभागी हुन
अछाममा थप सात हजार ४०७ जना मतदाता थपिए
पुस। अछाममा थप सात हजार ४०७ जना मतदाता थपिएका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको साउनदेखि पुस
एजेन्सी । विश्वको पर्यटन महामारीपूर्वको अवस्थामा फर्किन अझै दुई वर्ष लाग्ने विश्व पर्यटन संगठनले जनाएको
कोटेश्वरमा टिपरको ठक्करबाट अनन्त लिम्बुको मृत्यु
काठमाडौँ । काठमाडौँको कोटश्वरमा टिपरले टक्कर दिँदा अनन्त लिम्बुको लिम्बुको मृत्युको भएको छ । मोरङ
खोप कार्डको यसरी लिनुहोस् प्रतिलिपि
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्नका लागि माघ ७ गतेदेखि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप कार्ड